Jimciyada Hass Foundation oo ka Warbixisay Dhismaha Dugsiga Boodhinka Laascaanood | Dhaymoole News
Jimciyada Hass Foundation oo ka Warbixisay Dhismaha Dugsiga Boodhinka Laascaanood
October 17, 2016 - Written by wariye999
By: Faysal Axmed Kaarshe
Laascaanood (dhaymoolenews): Jimciyadda loo yaqaano Haas Foundation oo ka shaqaysa arrimaha samo-falka, isla markaana gacanta ku haysa dhismaha dugsiga Boodhinka ah ee laga waddo magaaladda Laascaanood (Hass Academy of Laascaanood), ayaa ka warbixisay halka uu marayo dhismaha dugsigaasi.
Dugsigan Hass Academy of Laascaanood, oo ku yaalla duleedka magaaladda Laascanood ayaa loogu tallo-galay in ardaydu ay ka helaan jiif iyo waxbarasho, isla markaana ka kooban afar qaybood kala gedisan. Waxaana dugsigan dhismihiisa iska kaashaday Jimciyadda Haas Foundation iyo hay’adda Care International.
Hass Academy of Laascaanood, ayaa ah dugsi waxbarasho oo aan noociisa oo kale hore dalka uga jirin, kaasi oo dhismihiisu aad u balaadhan yahay, isla markaana loogu tallo-galay wiilasha yo gabdhahuba ay wax ku wada bartaan.
Dugsigaasi oo dhismihiisa la bilaabay bishii 7-aad ee sanadkan, isla markaana hadda socday muddo saddex bilood ah ayaa hadda waxaa la dheemayay qaybtii loogu tallo-galay in gabdhuhu ay wax ku bartaan, qaybtii ay seexanayeen iyo qaybihii cuntadda lagu karsanayay.
Sida uu sheegay Eng. Jaamac C/Laahi Caydiid, oo ah gudoomiyaha Hay’adda Hass Foundation oo hadal ka jeediyay munaasibad lagaga warbixinayay halka uu marayo wejiga koowaad ee dhismaha dugsigaasi oo shalay lagu qaabtay meesha uu dhsimihiisu ka socdo.
Gudoomiyaha Hay’adda Hass Foundation, ayaa ka warbixiyay qaybaha uu dugsigaasi ka kooban yahay, halka uu dhismihiisu marayo iyo sidoo kale qaybaha uu ka kooban yahay. Waxaanu yidhi “Dhismihii shaqadiisii way socotaa, waxaana la bilaabay bishii todobaad ee sanadkan, waxaanu socday saddex bilood iyo badh dhismihiisu.
Hadda waxaanu gacanta ku haynaa wejigii 1-aad oo ah qaybta gabdhaha, taas oo ka kooban 6 fasal, laba Laab, 3 xafiis iyo maktabadii. Waxa kale oo socda qaybtii hurdada ee gablaha oo ka kooban 20 qol oo kor iyo hoos ah, iyo sidoo kale qaybtii cuntadda lagu karsanayay (Jikada) iyo hoolkii ay ku cuntayn lahaayeen ardaydu. Waxa kale oo weheliya wejigaa hore deyrkii lagu wareejinayey schoolka oo dhan”.
Eng. Jaamac, waxa uu intaasi ku daray “Anagoo jamciyad ahaan rejynayna in mudadaa dhismihiisu socday in le’eg oo kale-na wakhti ahaan qaadan doono, waxaanuna u qaybinay oo uu ka kooban yahay dhismaha dugsigu afar weji, waxaana ku xigta qaybtii wiilasha oo intaa in le’eg ah. Waxaana keliya oo ay ku kala duwan yihiin fasalada wiilasha ayaa ah 8 fasal ah.
Waxa kale oo wejiga 3-aad ah qaybtii adminka oo xafiisyadii school-ka laga maamulayey oo ilaa 10 xafiis oo isku xidhan ah iyo sidoo kale hurdadii macalimiintu ay degi lahaayeen oo rag iyo dumar-ba leh oo kala qaybsan.
Waxaa ku jira qaybtaa masaajidkii,waxaa kale oo ku jira dugsigii hoose/dhexe oo badhtanka gelaya. Wejiga 4-aad ayaa ah Garoomada ay ku ciyaari doonaan ardayda ku xeraysan dugsigan oo dhamaantii wiilal iyo gabdhoba boodhin ah. Waxaa wejiga u danbeeya uu noqon doonaa Hoolashada Farsamada gacanta sida Looxa iyo Birta-ba iyo sidoo kale ceelkii biyaha, Dhirayntii dugsiga, Biyo gelinta deegaanka dugsigu ku yaallo iyo waddo Laami ah oo magaalada si toos ah u soo gasha”ayuu yidhi C/laahi Caydiid.
Dhinaca kale Eng. Jaamac Cabdilaahi, waxa uu ka hadlay cadadka dhaqaale ku baxaya dhismaha dusgigan, shirkadaha qandaraaska lagu siiyay dhismaha dugsigan iyo cidda ka caawisay dhaqaale ahaan.
Isagoo arrimahaasi ka hadlaayay-na waxa uu yidhi “Dhismaha dugsigan oo dhaqaale badani ku baxayo, waxay hay’adda Care International ay iyadu qaybta hablaha dhiskiisa bixisay. waxaana afarta weji la kala siiyay labada hore laba shirkadood oo xidhiidh ahaan aanu kula heshiinay oo u doorranay. Halka labada weji ee kale ama iyagu sii wadi doonaan ama shirkado kale ay kula tartami doonaan”.
Ugu danbayn Eng. Jaamac C/Laahi Caydiid, waxa uu sheegay in ay si weyn uga fiirsanayaan tayadda dhisme ee uu yeelanayo dugsigaasi, isla markaana ay doonayaan in uu noqdo mid loo aayo oo muddo dheer jira, sidoo kale-na ay u qorshaysan tahay in awoodda saaraan sidii ay dugsigaasi uga soo bixi lahaayeen arday heerkoodda aqooneed uu si wanaagsan u dhisan yahay.
Eng. Jaamac, ayaa intaasi ku daray in maamulka waxbarasho iyo ka manhajka dugsigaasi ay gacanta ku haynayaan hay’adoodda Hass Foundation, sidaas darteed-na ay u qorshaysan tahay in dugsigu uu noqdo mid dhinac walba ka habaysan.Waxaanu yidhi “Waxaa kale oo xusid mudan in la dareemayo woxoogaa cag culays ah, taas-na waxaa sababaysa anagoo jamciyad ahaan ka fiirsanayna tayada iskuulkan oo aanu rabno in cimri dheer oo loo aayo uu noqdo. Waxaanu noqon doonaa iskuul aanu gacanta ku hayno maamulkiisa , macalimiintiisa iyo manhajkiisa-ba, anagoo xoogga saari doona in ay ka soo baxaan arday tayo leh oo dalka, dadka iyo qoysaskoodu-ba aayatiin ka helaan.Waxaanuna awoodda saarray sidii ay u heli lahaayeen ardayda wax ku baranaysaa adeeg hufan oo dhanka aqoonta waxbarashada ah iyo mid ay ardaydu baahi kasta kaga maar-maan dhinacyada adeega ee daryeelkoodda, maadaama uu yahay dugsi boodhin ah.”